Shiinaha 330mm Dhererka Sibidhka Carbide Rods Sifeynta Alaabta soosaarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
330mm Dhererka Sibidhka Carbide Rods Sharaxaada alaabta
Ulaha Carbide ee dhulka ku yaal oo dhererkiisu yahay 330mm
walxo isku dhafan oo ka kooban xeryahooda biraha ah ee adag (wajiga adag) iyo biraha isku xidhka (wejiga isku xidhka) ee ay soo saarto macdanta budada.
Ulaha carbide sibidhka leh ee ay soo saartay shirkadeenu waxay leedahay astaamaha waxqabadka xasilloon, alxanka fudud, xirashada iska caabbinta iyo saamaynta iska caabbinta. Maaddada waxaa inta badan loo adeegsadaa goynta waxsoosaarka aaladda, mashiinnada dhagaxa, qodista, jaranjarada. Ulaha carbide -ka waxaa loo isticmaali karaa goynta, shaabadeynta iyo aaladda cabbirka,
Shirkadeena waxay inta badan bixisaa h5, h6 dulqaadka ulaha carbide -ka ee dhulka ku yaal iyo meelaha bannaan ee usha carbide
Dhererka caadiga ah ee usha dheer waa 330mm iyo 310mm.
Ulaha dhaadheer ee cabbirkoodu kala duwan yahay ayaa sidoo kale lagu samayn karaa hadba baahida macmiilka
* Qalabkayaga ugu habboon 3 ee qoryaha iyo bir -ka -shaqaynta carbide endmill
ISO h6 dulqaad ISO h6 dulqaad
Ballaca (mm) Dhererka (mm) Ballaca (mm) Dhererka (mm)
Hore: Ulaha Carbide ee dhulka ku yaal
Xiga: Carbide Rotary Burr SA Qaab -Silinder Silsilad
330mm Ulaha Carbide